निरन्तर अभ्यासले सहज बनाउँछ गणित - एसईई - साप्ताहिक
निरन्तर अभ्यासले सहज बनाउँछ गणित
रामजीप्रसाद कोइराला, गणित शिक्षक
बालसेवा मावि, झाेंछे
गणित यस्तो प्राविधिक विषय हो, जसमा राम्रो तरिकाले समस्या समाधान गरे पूर्णांकबराबर अंक प्राप्त हुन सक्छ । विद्यार्थीले तल्लो तहदेखि नै ध्यान दिएर अध्ययन गरेको छ भने उनीहरू यो विषय अध्ययन गर्न उत्सुक हुन्छन् । गणितका सबै पाठ, एकाइहरू तल्लो तहदेखि नै जोडिँदै आएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि कक्षा १ बाट सुरु हुने जोड घटाउ १० कक्षामा गएर पनि त्यही कुरालाई फरक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यत: कक्षा ६ देखि माथिका विषयवस्तु एक–आपसमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन् ।
तल्लो तहमा कमजोर विद्यार्थीले माथिल्लो तहमा राम्रो गर्न सक्दैन भन्नेचाहिँ होइन । यदि मेहनत गरे त्यहाँ गएर पनि सहज रूपमा राम्रो नम्बर ल्याउन सकिन्छ । गणितमा राम्रो नम्बर ल्याउन हिसाब बुझेर बारम्बार गरिने अभ्यास सबैभन्दा बढी सहायक हुन्छ । यसमा न त घोकेर कण्ठ गर्न सकिल्न्छ न त अभ्यासबिना समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । कक्षा १० (एसएलसीमा छोटा प्रश्न १८ वटा दुई नम्बर गोटका ३६ पूर्णांकको हुन्छ । लामो प्रश्न १६ वटा चार नम्बर गोटाका ६४ पूर्णांकको प्रश्न सोधिन्छ ।
कुन समूहबाट कति पूर्णांक
अंकगणित– ३० पूर्णांक
बिजगणित– २४ पूर्णांक
ज्यामिति– २४ पूर्णांक
तथ्यांक शास्त्र– ८ पूर्णांक
त्रिकोणमिति– ६ पूर्णांक
सम्भाव्यता– ४ पूर्णांक
समूह (सेट)– ४ पूर्णांक
अंकगणित : अंकगणितको पाठ्यक्रम विशेष गरी हाम्रो व्यवहारमा दैनिक प्रयोग हुने समस्यालाई आधार मानेर तयार गरिएको हुन्छ । विद्यार्थीले पनि त्यही कुरालाई ध्यान दिएर अध्ययन गरे सजिलो हुन्छ । नाफा–नोक्सानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा त्यसको सूत्र, प्रचलित भ्याटदर र ब्याजको छुटसम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ । चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको भिन्नता बुझ्नुपर्छ । चक्रीय ब्याजको हिसाब गर्दा आउने सबै नम्बर अनिवार्य लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
समय र कामसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा भिन्नसम्बन्धी ज्ञान पनि हुनुपर्छ । भिन्न गर्दा सरलसमेत गर्न जान्नुपर्छ । सूत्रहरूको सही जानकारी राख्नुपर्छ । क्षेत्रमितिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्दा वृत्त, बेल्ना, गोल र सोलीसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । यसलाई पनि हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवहारिक सामानहरूसँग जोडेर सम्झनुपर्छ । त्रिभुज, क्षेत्रफल, वर्ग र आयतको क्षेत्रफलको ज्ञान र त्यससम्बन्धी सूत्रको ज्ञान हुनुपर्छ ।
बिजगणित : यसमा चारवटा छोटा प्रश्न र ४ वटा लामा प्रश्न सोधिन्छ । पाठ्यपुस्तकमा आधारित भएर नै प्रश्न सोधिन्छ तर अल्फावेट फरक पर्न सक्छ त्यसमा विद्यार्थीले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि किताबमा ब्,द्य,ऋ, म् हुनसक्छ तर प्रश्नमा ध, ह, थ, श सोधिन सक्छ । फर्मुलाहरू शुद्धसँग सम्झनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी झन्डै उस्तै फर्मुलालाई फरक हिसाबमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसले नम्बर आउँदैन, मेहनत मात्र खेर जान्छ । हिसाब गर्दा स्टेप छोड्न हँुदैन, गराइ मिलेको छ भने उत्तर नमिले पनि केही नम्बर आउँछ । पाठ्यपुस्तकमा भन्दा पनि अघिल्ला ५ वर्षमा आएका प्रश्नपत्रको बारम्बार अध्ययन गर्नुपर्छ । बिजगणितको फर्मुलामा सानो मिस्टेक भए फ्याक्टर बिग्रन्छ । प्राय: त्यहाँ (ं,() बिग्रिएको हुन सक्छ ।
बिजगणितीय सरल गर्दा सुरुमा गुणनखण्ड, लस, भाग, गुणा, जोड–घटाउ क्रमश: गर्दै जानुपर्छ । त्यसका लागि अघिल्लो कक्षामा यी विषयमा जानकार हुनुपर्छ । समीकरण र वर्ग समीकरणको समस्या समाधान गर्दा गुणाको अवधारणा थाहा हुनुपर्छ । संख्याको प्रकार जान्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृतिक संख्या (गन्ती संख्या र जोर–बिजोर) जान्नुपर्छ । वर्ग, घन र पूर्णांक संख्याको जानकारी हुनुपर्छ ।
सेट : कक्षा ६ देखि नै यसको पढाइ हुने हुँदा सेटको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान हुनुपर्छ । यो विषय जोड घटाउमा आधारित भएको हुँदा हिसाबमा उनीहरूको सम्बन्धको राम्रो जानकारी चाहिन्छ ।
त्रिकोणमिति : उचाइ र दूरीसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक छ । कष्ल, अयक, तबल र त्यसका कोणहरूको
मानको ज्ञान हुनुपर्छ । सूत्रमा विशेष ध्यान दिई चित्रमा उतारेर समाधान गर्नुपर्छ ।
सम्भाव्यता : सम्भाव्यताको सूत्र जान्नु अनिवार्य छ । यो जोड र गुणाको सिद्धान्तमा वृक्षचित्र बनाउनुपर्छ । संख्याको प्रकार र ताससम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ । नमुनाहरू ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ ।प्रतिस्थापन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ ।
ज्यामिति : विशेषगरी लामो प्रश्नमा साध्य प्रमाणित गर्ने प्रश्न हुन्छ । यसरी प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख कुरा प्रश्नमै नामाकरण गरिएको छ भने त्यही नाम राख्नु हो । यदि त्यस्तो नाम दिइएको छैन भने आफूलाई मन लागेको नाम राख्न पाइन्छ । आफू बसेको कक्षा कोठा, किताब बेल्ना आदि आफूले प्रत्येक दिन प्रयोग गरेका र देखेका कुरालाई सम्झेर अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ जसले प्रश्नको समाधान सहज हुन्छ । यसलाई व्यवहारिक शिक्षाको रूपमा तुलना गर्नुपर्छ । वृत्त तथा क्षेत्रफलसम्बन्धी राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित :फाल्गुन २६, २०७३
बेनिशालाई हरेक भूमिका सहज
सत्य एउटै हुन्छ
स्वयंसेवी रक्तदाता खोज्न सहज साइट
आँखा सुख्खा हुने
सहज छैन वैदेशिक रोजगारी
अमेरिका भने जस्तो सहज छैन
एसईईपछिको समय चैत्र २३, २०७३
नेपाली विषयमा बढी अंक कसरी प्राप्त गर्ने ? चैत्र १, २०७३
विज्ञानको तयारी कसरी गर्ने ? फाल्गुन १५, २०७३
एसएलसीमा असफल हुँदा असार ११, २०७२
एसएलसीपछि के गर्ने ? असार ४, २०७२
खुला आकाश असार ४, २०७२
'फेल’ हुनुभो ? ल बधाई छ ! असार ६, २०७१